Miatrika ny vanim-potoanan’ny fizahantany tsy mahazatra ny torapasika fitsangatsanganana any Albania · Global Voices teny Malagasy
Mpizahatany an-toerana sisa nianteherana noho ny fanafoanana ny famandrihana maro
Voadika ny 19 Janoary 2021 4:52 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Shqip, русский, Français, polski, Español, Português, عربي, English
(Lahatsoratra tamin'ny volana Jona 2020)
Torapasika any atsimon'i Albania. Sary avy amin'i Ardi Pulaj, nahazoana alàlana
Matetika isan-taona no feno ny famandrihana ao amin'ny hotely malaza Adriatik Hotel ao amin'ny serana-tsambon'i Durrës any Albania. Saingy tsy toy ny “ankamaroan'ny taona” ny taona 2020 izay taonan'ny valan'aretina coronavirus.
Nanokatra indray ny varavarany tamin'ny 18 Mey ny hotely, rehefa nivoaka tamin'ny fihibohana ny firenena izay nanakatona ny moron-dranomasina sy ny sisin-tany tamin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy hatramin'ny voalohan'ny volana Jona.
Nihena 85% ny famandrihana na dia teo aza ny fanalefahana, hoy ny tale jeneraly Nevila Dudaj.
“Betsaka ny famandrihanay ho an'ny vanim-potoana mafana 2020 nanomboka hatramin'ny fararanon'ny taona 2019 ary niato izany nandritra ny herinandro voalohany volana Martsa,” hoy izy.
“Ny vahiny vitsivitsy nanao famandrihana manan-kery no nanemotra ny fijanonany amin'ny taona manaraka, fa ny ankamaroan'ny vahininay kosa dia nangataka famerenam-bola, ka niteraka fahasahiranana ara-bola taminay,” hoy i Dudaj, izay mitantana ny Adriatik Tours any Etazonia ihany koa .
“Haharitra iray na roa taona farafahakeliny ny fanarenana ny sehatry ny fizahantany,” hoy i Dudaj tamin'alahelo.
Fepetra hiadiana amin'ny COVID-19 aseho ao amin'ny Hotely Adriatik any amorontsirak'i Durrës, Albania. Sary avy amin'i Ardi Pulaj, nahazoana alàlana.
Tsy ny rehetra anefa no mitaraina.
Tanàna kely amoron-tsiraka eo anelanelan'ny Himarë sy Vlorë i Dhërmi, atsimon'i Albania. Malaza amin'ny Albaney sy ny vahiny noho ny morontsiraka mahafinaritra sy ny toetr'andro tony ny toerana.
Matetika no mandray ireo mpizahatany avy any Angletera, Polonina, Repoblika Tseky, Belzika, Aotrishy, Frantsa ary Italia 2 Lips, bara, trano fisakafoanana sady hotely any amoron-dranomasin'i Dhërmi. Sambany no tonga tany ireo mpizahatany Shinoa tamin'ny taon-dasa.
Nilaza i Ernis Osmanaj, tompon'ny 2 Lips fa mitovy tamin'ny taon-dasa ny famandrihana amin'ity taona ity.
“Ny maha samihafa azy fotsiny dia avy any Tirana ny mpanjifanay tamin'ity vanim-potoana ity fa tsy avy any Angletera toy ny tamin'ny taon-dasa,” hoy i Osmanaj.
Ho an'i Osmanaj, ny mandresy lahatra ny mpanjifa hanaraka ny fepetra hiadiana amin'ny COVID-19 no zavatra sarotra indrindra. Tsy maintsy tsapaina hafanana sy mampiasa famonoana otrikaretina ny mpanjifa rehefa miditra sy mivoaka ny trano, hoy izy.
Nanome baiko ny hotely sy ny toeram-pitsangatsanganana hampiasa “mpandrindra” miady amin'ny COVID-19 hanara-maso izany fepetra izany ny fenitra napetraky ny governemanta Albania. Tsy maintsy manao arovava sy fonon-tànana amin'ny fotoana rehetra ny mpiasa.
Mandroso mianatsimo kokoa, efa niomana amin'ny vanim-potoana mafana sarotra ihany koa ny tanàndehibe amorontsirak'i Saranda.
Any no ahitan'ny mpizahatany ny faharavana taloha amin'ny valan-javaboary Butrint ary ankafizo ny fandehandehanana sy ny torapasika mahafinaritra.
Tamin'ny volana Febroary, Saranda no laharana faharoa tamin'ny toerana mahasarika ny vahiny ao amin'ny Tripadvisor isan-taona, aorian'ny Kaliningrad any Rosia.
Ny hotely Seaside Artist ao Saranda, sary nomen'ny mpitantana, nahazoana alàlana.
Nihena 60% ny famandrihana raha ampitahaina tamin'ny taon-dasa tao amin'ny Seaside Artist, trano fisakafoanana tantanan'ny fianakaviana iray sady hotely ao Saranda. Nahitana mpizahatany avy any Italia ny famandrihana ny volana Aogositra raha antenaina fa handray mpizahatany avy any Bolgaria, Alemaina ary Gresy kosa ny volana Septambra.
“Tamin'ity vanim-potoana ity, maro ny fanafoanana noho ny fanjavozavoan'ny fivoaran'ny valan'aretina. Hiasa amin'ny minitra farany izahay amin'ity vanim-potoana ity. Tsy mbola misy olona voan'ny coronavirus na dia iray aza ao Saranda ary vonona handray ireo mpizahatany izahay,” hoy i Rudina Toska avy ao amin'ny hotely sady toeram-pisakafoanana Seaside Artist.
Natao ho an'ireo ao an-toerana
Manampy ireo trano fandraisam-bahiny any Ksamil, akaikin'i Saranda i Ejiris Shoshi ary mitantana ny famandrihana avy amin'ireo sampan-draharahan'ny fizahan-tany an-tserasera. Mifandray mivantana amin'ireo mpizahatany izay miala sasatra any amin'ny morontsiraka Ioniana Albaniana izy. Nofoanana ny 72% tamin'ny famandrihana tamin'ity taona ity.
Tao Ksamil, nihena betsaka ny isan'ny mpizahatany Skandinaviana tao anatin'ny roa taona. Nanjary tian'ny mpitsidika avy any Polonina, Okraina, Romania ary Rosia kosa ny toerana.
Ny morontsiraka manokan'ny hotely Abalone any Ksamil. Sary avy amin'i Ardi Pulaj, nahazoana alàlana.
“Ny famandrihana vitsy dia vitsy voarainay ho an'ny volana Aogositra sy Septambra. Vanim-potoana tsy ampoizina io, noho ny ireo mpizahatany eto an-toerana tamin'ny minitra farany vao manao famandrihana sy ireo mpizahatany vahiny — voafetra ho an'ireo izay manam-bola hanao dia amin'ity taona ity – izay tsy fantatra ny fomba ahatongavany,” hoy i Shoshi.
“Ny fanaovana ny dia no ahiahin'ireo mpizahatany vahiny, tsy noho ny fanidiana ny sisin-tanin'i Albania ihany, fa ny firenena andalovana rehetra ihany koa.”
Miara-niasa amin'ireo hotely ao amin'ny faritra, nanohana ara-bola ny fanaovana doka tamin'ny tambajotra sosialy ny sampan-draharahan'i Shoshi ary nifantoka tanteraka tamin'ny tsena anatiny.
Fizahantany tia tanindrazana
Nilaza i Nevila Dudaj avy amin'ny hotely Adriatik sy ny sampan-draharahan'ny fizahantany Adriatik fa tena zava-dehibe amin'ny famerenana ny indostrian'ny fizahantany ny fandraisana anjaran'ny ampielezana Albaney.
“Na dia tao amin'ny New York Times Travel Show tamin'ny volana Janoary 2020, izay nandraisako anjara aza dia nangataka tamin'ny Albaney rehetra aho, na aiza na aiza misy azy ireo, mba hitsidika sy hiala sasatra any Albania, satria tokony hotohanan'izy ireo ny fizahantany Albaniana. Ary mila ny fanohanan'izy ireo izahay ankehitriny, mihoatra noho ny hatramin'izay, noho ny valan'aretina COVID-19” hoy i Dudaj.
Hatreto dia ireo mpizahatany avy any Kosovo sy ny faritra Balkans Andrefana no tonga nizahan-tany tao an-toerana nanao fialantsasatra tao amin'ny morontsirak'i Albania.
Amin'izao fotoana izao, olona miisa 2.047 no voarakitra fa voan'ny coronavirus any Albania, ary olona miisa 45 no namoy ny ainy.